Indonezia: Mafàna Fo Maty Taorian’ny Dorotena Nataony Nanoloana Ny Lapam-panjakana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Janoary 2012 2:07 GMT
Sondang Hutagalung, mafàna fo iray amin'ny fiarovana ny zon'olombelona ary mpianatra amin'ny sampana lalàna, dia matin'ny fahamaizana ambaratonga voalohany nahazo azy taorian'ny dorotena nataon'ny teo anoloan'ny lapam-panjakana ao Jakarta Indonezia.
Sondang Hutagalung nandritra ny hetsika fahatsiarovana ilay mafàna fo mpiaro ny zon'olombelona, Munir Said Thalib. Sary avy amin'i Dina Savaluna, nampiasaina ambany fanomezan-dàlany.
Moch Najib Yuliantoro nanoratra [id] tao amin'ny bilaoginy hoe:
Tanatin'ny fahatsiarovan-tena tanteraka no nanaovany izany, efa voaomana, ary ho amina tanjona tokana : fiovàna. Saingy inona no niseho taorian'ny nahafatesan'i Sondang? Mbola mitohy mifehy sy mifikitra amin'ny toerany ireo eo amin'ny fahefana. Iarahant'ny rehetra, 10 andro taorian'ny nahafatesany, mbola ny nisy antsika ihany no misy antsika izao.
Najib dia manahy fa hianjera any anaty sofin'ny marenina ny nofinofin'i Sondang hànana Indonezia mendrika kokoa :
(Our) Ny fahatsiarovantena(ntsika) rehetra miaraka ho i “Indonezia” no voadotra ho lavenona. Raha ny dorotena nataony, dia diso i Sondang nieritreritra ny hahita fiovàna goavana tahaka izay nitranga tany Tonizia. Samihafa amin'i Tonizia ity firenena ity. Firenena “maty” ity. Tsy misy mirary revolisiona izany intsony isika.
Sella Wahyu dia niteny [id] tao amin'ny bilaoginy hoe :
Ity tranga ity dia niteraka fanehoan-kevitra samihafa avy amin'ny olona. Ny ankamaroan'izy ireny dia mitsetra, mijery ny fahatanoran'i Sondang sy ny fiainana lavabe efa niainany teo anoloany, ny sasany nijery an'i Sondang ho toy ny olona iray “sahy ny ho faty fa tsy sahy ny ho velona” ary ny sasany nijery azy ho toy ny maritioran'ny demaokrasia.
Raikitra anaty fetan'ny ompa natao ho an'i Sondang isika, tsy vitantsika ny nijery hoe ireo olana goavambe eto amin'ity firenena ity no antony nandoroany tena, ho toy ny làlana iray hidradradradràna ny tao an-tsainy.
Arman Dhani Bustomi dia nanoratra lahatsoratra am-bilaogy iray ho fanomezam-boninahitra an'i [id] Sondang miaraka amin'ny fampidirna manao hoe, “mitelina ny zanany ihany ny revolisiona”:
Heveriko fa takatr'i Sondang tsara hoe misy foana ny sorona isaky ny ady tsirairay. Takany ihany koa fa misy kofehy manify eo anelanelan'ny mpandàla fahalavorariana sy ny fanaovana hadalàna. Ary ny fanaovana sorona dia resaka fomba fijery fotsiny ihany. Fa tsy misy na iray aza eto ambany masoandro manan zo hitsara na hanome alàlana ady iray. Ny tolona iray dia resaka faharesen-dahatry ny tena manokana.
Heveriko fa nahatsiaro an-dreniny i Sondang tamin'io fotoana io. Nahatsiaro ny fitiavana sy ny fankatoavany fony izy nitantana azy tany an-tempoly. Teo am-pihainoana ireo hira masina fiderana. Ny ‘Rainay izay any an-danitra’. Nahatsiaro ny Noely sy ny hafalian'ny fianakaviany, ireo fahatsiarovana mahafinaritra. Ary dia nitanisa miadana ny vavaka nataony, nangataka famelàna. Tao anatin'ireo orany mangidy farany dia nanontany izy hoe, “Ray ô, ho voavela heloka ve aho?”
Heveriko fa feno hatezerana i Sondang. Saingy tsy irery izy. Izaho koa, dia tezitra ankehitriny. Noho ny hadalako. Ny halemeko. Ny tsy fahalalako manoloana ireo olana atrehan'ity firenena ity.
Gaerty an-tsoratra iray ao an-toerana, ao Avaratr'i Sumatra ny Harian Orbit, nitanisa ny filaàzan'ireo namana mafàna fo mpiara-nitolona tamin'i Sondang ho fiarovana ny zon'olombelona fa hoe i Sondang dia nandefa taratasy efa ho 1.400 momba ny fanitsakitsahana zon'olombelona ho an'ny Filoha Susilo Bambang, saingy na iray aza tamin'izy ireny tsy nisy voarain'ny filoha noho ny resaka ambaratongan-drafitra tao an-dapam-panjakana.
Ny toeram-pianaran'i Sondang teo aloha, ny anjerimanontolon'i Bung Karno, dia nanome azy ny laharam-boninahitra Docteur Honoris Causa ary nanome anarana ny efitrano manan-kajan'ny Fakiolten'ny Lalàna ho Efitrano Sondang Hutagalung.
Momba ny laharam-boninahitra nomena an'i Sondang, ilay bilaogera Yusuf Harfi dia nanontany hoe [id], “fa mba fomba ahoana koa no nanomezana olona iray nandoro tena ny laharam-boninahitra ambony tahaka izany?”
Izaho manokana aloha tsy mandray an'i Sondang ho toy ny mahery fo na tia tanindrazana mpitaky fiovàna tahaka ny andraisan'ny olona maro azy.
Eny, ifampizarako aminy koa ny ahiahin'i Sondang, miasa loha amin'ny teo-draharaha iainan'ny Indoneziana amin'izao fotoana koa aho. Saingy tsy midika izany fa amin'ny maha-olom-pirenena dia tokony isika hanao fihetsika henjana be tahaka ny fandoroana tena isika. Ny antokom-pinoana rehetra dia mampianatra antsika hanohy hanandrana hatrany, hitozo, tsy hihozohozo, ary tsy hanary mihitsy ny fanantenana.
Andro iray taorian'ny dorotena nataon'i Sondang, ny filohan'ny Filankevitra Foibe Indoneziana Ulema (MUI), Amidhan, dia niteny [id] fa ny fandoroana tena dia “haram” (voararan'ny finoana silamo), ary mandray ny olona mpandoro tena ho toy ny olona very fanantenana sy tsy milamin-tsaina.
Fisaorana manokana ho an'i Dina Savaluna tamin'ny fanolorana ny sary.